I-China TPU eshushu yokunyibilika ifilimu yabenzi beempahla zangaphandle kunye nabathengisi | I-H & H
Indawo yokunyibilika 85-125 ℃
Umsebenzi wobugcisa Umatshini wokucinezela ubushushu: 150-160, 10s 0.4Mpa
I-HD371B yenziwa ngezinto ze-TPU ngokulungiswa okuthile kunye nefomular. Ihlala isetyenziselwa ukungangeni manzi ibhanti enemilenze emithathu, iimpahla zangaphantsi ezingenamthungo, ipokotho engenamthungo, uziphu ongangeni manzi, umtya ongangeni manzi, izinto ezingenamthungo, iimpahla zemisebenzi emininzi, izinto ezibonakalayo kunye nezinye iinkalo. Ukulungiswa okudityanisiweyo kwamalaphu eelastic ahlukeneyo anje ngelaphu yenylon kunye nelaphu le-lycra, kunye nentsimi ye-PVC, yesikhumba kunye nezinye izinto ezinje ngeplastiki yempahla / uziphu / ipokotho / ulwandiso lomnqwazi / uphawu lwentengiso.
1. Isandla esiziva ngokulula: xa sisetyenziswa kwilaphu lokulaminisha, imveliso iya kuba nokunxiba okuthambileyo kwaye kukhululekile.
2. Ukumelana nokutya xa kutyiwa: Kuyakuxhathisa ukuhlamba amanzi amaxesha ali-10 ubuncinci.
5. Indawo yokunyibilika ephezulu: Iyahlangabezana nezicelo zokumelana nobushushu.
I-TPU Hot melt ifilimu yokuncamathelisa isetyenziswa ngokubanzi kwizambatho zangaphandle ezinje ngeplacket, ikhafu yokuthambisa kunye nokutywinwa komthungo okuthandwayo okwamkelwa ngabathengi ngenxa yokuba ithambile kwaye ikhululekile ukunxiba imvakalelo okanye ukuxabiseka kobuhle. Kukwayinto eyenzekayo kwixesha elizayo ukusebenzisa ifilimu yokunyibilikisa eshushu yokutywina umthungo endaweni yokuthunga ngokwesiko.
I-HD371B TPU ifilimu yokunyibilikisa eshushu isetyenziswa ngokubanzi kwibheji eboyiweyo kunye nelebheli yelaphu ethandwayo eyamkelweyo ngabenzi beempahla ngenxa yomgangatho wobume bendalo kunye nokulungiswa kokulungiswa. Esi sisicelo ngokubanzi kwimarike.
Egqithileyo Ifilimu yokuncamathela eshushu eshushu kwimpahla yangaphandle
Okulandelayo: Iteyiphu eshushu yokunyibilika kwesambatho sangaphantsi esingenamthungo